Nepachinko yokumusoro iri payout ezvinhu uye kukurudzira kuti weekday uye pazororo
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Nepachinko yokumusoro iri payout ezvinhu uye kukurudzira kuti weekday uye pazororo
Muna nepachinko yokumusoro, chichagamuchirwa kukamurwa muchitoro kuratidza chido zvitoro uye kupera kwevhiki kuti kuratidza kukurudzira pamusoro mevhiki. In chete nepachinko parlors, nei musiyano akadaro anobuda, tichakurukura kuti ndirege Mikiwamere chakaita panzvimbo ipi. Nepachinko yokumusoro kuratidza chido mevhiki, kazhinji isu vanounganidza kuti vane nzvimbo ezvinhu.
Somuenzaniso, haasi kumhanya zvakanaka chitoro ukama pamberi chechitima zvitoro uye zuva revhiki.
nepachinko kwakadaro zvitoro, uye vazhinji airarama mutengi ndiani achaenda mevhiki zhinji, pane kuda kuedza kuda. Vatengi vanouya mevhiki, zvichienzaniswa vatengi vasinganamati mauya chete pakupera kwevhiki, une vo uwandu mazuva akasiyana uyewo kuramba mari kwatiri kuburikidza. Good nepachinko yokumusoro kushanda musi mevhiki, wodzokorora akaporazve Akaroromesawo weekday kuti vatengi, ita iwe uye regai kuitira yakatsiga rokutengesa uye kwakakomba purofiti uye kushanda.
nokuti, asi madhigirii shoma vhiki, tiite yebhizimisi kuratidza nokukurudzirwa.
Zvisinei, zvinoita sokuti omei kutaurira. Mevhiki, nekuti pane 5 Mazuva pavhiki, pane kudzima zvose kamwechete, musvike zvishoma nezvishoma rokuparadzira. Pakadaro, uyewo kutsikwa zvipikiri kugadziridzwa, Horukon ezvinhu, ari kuuya asisiri chete kuona sefungu ROM ndiyo Nezvagara Zviripo. Ko kupinda weekday mazuva mashoma, haufaniri kukwanisa kuwana mevhiki chakaita.
Zvisinei, kwakadaro nepachinko yokumusoro, saka kwevhiki uye mazororo richava nechokwadi kuti muunganidzwa zuva, uyo havafaniri akauraya Ndinofunga kuti zvinokuchengetedzai.
achinje mukati, asi ari nepachinko yokumusoro kuratidza chido yeMugovera uye misi yeSvondo, ichava zvakajairika nepachinko parlors uye Suburban zvitoro kuti havagoni kuva yakagadzikana oparesheni. Sezvo
Mugovera uye Svondo ndiyewo zuva kukwira mashandiro sezvingatarisirwa, kazhinji ndiko kupira apore kwakakurumbira, ndiko kuti nepachinko yokumusoro kuti zviri kuitika ezvinhu asingagoni kuva. Zvichireva kuti ndechokuti anofanira kuratidza chido yeMugovera uye misi yeSvondo, pazuva kwevhiki vanhu vanounganidza, yakanga yakabatana kuti weekday kushanda pamwe vakanaka Nekuti pane nhamba.
In akadaro nepachinko yokumusoro, kana nani chete basa Migovera uye misi yeSvondo, kana edza kugadzirira mubayiro shoma, unogona kuona nesimba kunyange kupfuura payout. Appeal nguva pane chakaita, kupfuura nepachinko parlors kuratidza chido muvhiki, ndinofunga kuti nyore kunzwisisa. Uyezve, Migovera uye Svondo pane mazuva maviri chete. Nokuti shanduro kusvika nyore chakaita nyaya kunzwisisa panguva ino, tinofanira kuenda wavanozvisunga zvainanga mazuva maviri Mugovera uye Svondo. Wangova chinangwa, zvishoma weekday kumhanya, ndinofunga kuti vanhu nepachinko parlors kuti ape chakaita kwevhiki anowana chikamu inowedzerwa.
nepachinko yokumusoro shure nechido, mabasa uye mibayiro kuwedzera bhora kunze, ukuru kuziviswa mapepa uye zvakafanana, pane chikamu kuti kunogona kuonekwawo kunyange kubva kunze. Nepachinko yokumusoro kuti ndinoenda kutamba, imi muri kunze kukurudzira mune zvose mevhiki uye mazororo, pokuti vavariro kunoonekwa ndechokuti hazvishamisi ikoko.